गाईपालनबाट दुर्गाबहादुरलाई सफलता – Palpa Samachar
सञ्जु पौडेल पाल्पा । मस्याम गाविस वडा नं. ७, बगैचाबारीका ३७ वर्षीय दुर्गा बहादुर खाड ठकुरी सामान्य परिवारको सदस्य हुन् । परिवारमा उनी आफू एक्ला छोरा हुन् । उनका ७ जना दिदीहरु छन् ।दुर्गा बहादुरले पारिवारिक समस्याको कारण रोजगारीको लागि २ वर्ष भारतमा काम गरे । भारतमा काम राम्रै भएता पनि अर्काको ठाउ“मा यसरी कामगर्नु भन्दा आफ्नै ठाउमा केहीगर्ने मानसिकता बोकेर उनी नेपाल फर्किए ।
टेष्ट पास मात्र भएका दुर्गाले ४ वर्ष अगाडि ब्यवसायिक रुपमा गाई पालन शुरु गरेका हुन् । नेपाल फर्किए लगत्तै उनले आफ्नो पशु प्रतिको नजिक हुने चाहनालाई पुरा गर्न बाख्रापालन ब्यवसाय शुरु गरे । अन्य गाउलेको भन्दा नया शैलीले गरिएको बाख्रापालन ब्यवसायमा उनले राम्रो प्रगति गर्दै गए । उनले उत्साह पूर्वक गरेको ब्यवसायिक बाख्रापालन ब्यवसायको बारेमा छर–छिमेक तथा आफ्नो गा.वि समा प्रचार हुदै गएको थियो । भर्खरको युवा भएर पनि कति लगनशीलता भएर काम गरेको भनेर गाउलेहरु सबै जना छक्क पर्दथे ।यसै क्रममा उनले गा.वि.स. मार्फत ए.एच.टि.सी.एस. नामक संस्थाबाट पोखरामा ३५ दिने ग्रामिण पशु कार्यकर्ता तालिम लिने मौका पाए । जुनतालिमले उनको ब्यवसायिक जिवननै परिवर्तन गरिदियो । तालिम लिदै जादा आफूले बाख्रापालन ब्यवसाय गर्दा कहा कहा के के गल्ती भनेर स्वःमूल्यांकन गर्ने मौका पाए । तालिम लिइ सके पछि दुर्गालाई पशुहरुको खानपिन, रोग, हावापानी बारेमा धेरै जानकारी भयो । उनले गाउ“मा विभिन्न किसिमको भेलाहरु गराएर पशु स्वास्थ्य तथा पशु सम्बन्धी गाउलेहरुलाई आवश्यक जानकारी दिने गर्दथे । उनले दिएका जानकारीहरुलाई गाउ“लेहरुले पनि चासो राख्न थाले । गाई पालन गरेको भनेर शुरुमा परिवारले उनलाई केही सहयोग गरेको थिएन तर उनले हिम्मत नहारी आफ्नो काम गरिरहे । विस्तरै गाई पालनको महत्व बुझ्दै गए पछि परिवारको सदस्यहरुले पनि उनलाई सहयोग गर्न थाले । त्यस्तै, पहिले होच्याउने मानिसहरु नै अहिले उनी सग गाईपालनको ब्यवसायको लागि सल्लाह लिन आउछन् । आफ्नो ठाउलाई गाईको पकड क्षेत्र बनाउन कस्सिएका दुर्गागाई पालनका क्रममा केही समस्या पर्ने बित्तिकै जिल्ला पशु सेवा कार्यलय ,पाल्पामा पुगिहाल्थे । जसले गर्दा उनले गाई पालन ब्यवसायमा दिनदिनै प्रगति गर्दै गए ।
दुर्गाले २ ओटा गाईबाट शुरु गरिएको ब्यवसायमा अहिले ३५ ओटा गाईहरु छन् । गाई पालन ब्यवसायका क्रममा परेका समस्या समाधान गर्न तथा आवश्यक जानकारी लिनका लागि दुर्गा नियमित जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जादा उनलाई एक्लै जादा भन्दा पनि सामुहिक रुपमा जादा अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अनुभूति हुन थाल्यो । बाख्रापालन तथा बंगुर पालन ब्यवसाय मात्र गरिने त्यस क्षेत्रमा दुर्गाले गरेको ब्यवसाय देखेर स्थानीय बासिन्दाहरुमा गाई पालन ब्यवसाय प्रति चासो बढ्दै गएको थियो । त्यसपछि उनले गाउलेहरुमा गाई प्रतिको चाहना अझ बढाउने उद्देश्यले आफ्नो अध्यक्षतामा छापपशु विकास समिति मार्फत गाउ भरि सबै सदस्यले कम्तीमापनि एउटा गाई पाल्नै पर्ने नियम बनाएका थिए ।
उक्त समितिमा अहिले ३८ जना सदस्यहरु सहभागी छन् । गाउभरिबाट उत्पादन भएको दुधको संकलन दुर्गा आफैले गर्दथे । आफूले उत्पादन गरेको दुधको पूर्ण रुपमा खपत भएपछि क्रमशः गाउलेहरुले गाईको संख्यामा बृद्धि गर्न थाले । दुर्गाले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा अहिले सम्म २ हजार भन्दा बढीलाई ब्यवसायिक गाई पालन ब्यवसायको बारेमा जानकारी दिइ सकेका छन् । दुर्गाको आफ्नो ब्यवसाय मार्फत दैनिक १ सय २० लिटर सम्म दुध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसैगरि त्यस क्षेत्रका ब्यक्तिगत तथा समिति मार्फत करिब १८ सय लिटर सम्म दुध उत्पादन हुने गर्दछ । यसरी उत्पादन भएको दुध पाल्पा बजारमै खपत हुदै आएको छ । हाल उनी आफ्नो ब्यवसाय मार्फत मासिक एक लाख बचत गर्दै आइरहेका छन् ।